कसरी इन्टरनेटमा कसैलाई खोज्ने: सर्वश्रेष्ठ वेबसाइटहरू | ग्याजेट समाचार
जब हामीले एक व्यक्तिलाई खोज्नुपर्दछ, हामी विभिन्न विधिहरू पार गर्दछौं। विगतमा हामीले सेतो पृष्ठहरूको सहारा लिनुपर्‍यो, जसले सधै अपेक्षित परिणाम दिदैन। वास्तवमा, जब हामी कसैलाई खोज्न चाहन्छौं हामी यसलाई इन्टरनेटमा खोजी गरेर गर्छौं। विशेष गरी यदि हामीसँग त्यस व्यक्तिको नाम मात्र छ, तर हामीलाई अरू केही थाहा छैन।
इन्टर्नेटमा कसैलाई कसरी भेट्ने? आज हामीसँग केहि विकल्पहरू उपलब्ध छन्, जसको साथ हामीले हामीले खोजेको व्यक्ति फेला पार्न सक्दछौं, ताकि यो प्रक्रिया सकेसम्म सरल र सीधा भयो। त्यहाँ धेरै वेब पृष्ठहरू छन् जुन यो खोज प्रक्रियामा सहयोगी हुन सक्छ।
2 सेतो पृष्ठहरु
सामाजिक नेटवर्क भएको छ इन्टरनेटमा कसैको लागि खोजी गर्न उत्तम तरिकाहरू। धेरै जसो अवस्थाहरूमा हामी यस व्यक्तिको नाम प्रयोग गर्न सक्दछौं, शहर थप्न सक्षम हुनुका साथै, यदि हामीलाई यो जानकारी थाहा छ भने। यो व्यक्तिलाई खोज्दा सबै भन्दा सहज विकल्पहरूको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कमा प्रोफाइल भएका विश्वभरका धेरै मानिसहरूका कारण।
हामीले भर्खर फेसबुक भित्र खोजी गर्नु पर्छ यस व्यक्तिको नाम प्रयोग गरेर, यदि हामीसँग यो अतिरिक्त डेटा छ जस्तो शहरमा उहाँ बस्नुहुन्छ, हामी यो नाम पछि पनी जोड्न सक्छौं। त्यसपश्चात हामी सबै परिणामहरू फेला पार्नेछौं जुन त्यो नामसँग मेल खान्छ, केही केसहरूमा नामका विविधताहरू पनि देखाइन्छ (अर्को अक्षरको साथ, वा यदि यसलाई छोट्याइएको छ)। त्यसोभए यो सम्भव छ कि हामीले त्यस व्यक्तिलाई भेट्यौं।
हामी विगतका जस्तै सेतो पृष्ठहरू प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्छौं, तर अब इन्टरनेट मा। किनकि तिनीहरूको आफ्नै वेबसाइट छ, यस लि this्कमा पहुँच गर्नका लागि। यो एक क्लासिक विधि हो, तर यो अझै उपयोगी छ जब हामी कसैलाई खोज्न चाहन्छौं। यो सम्भव बनाउनको लागि, हामीलाई कम्तिमा यी तीन फिल्डहरू मध्ये एउटा भर्नुहोस्: नाम, पहिलो थर र / वा दोस्रो थर। यस तरीकाले, हामी परिणामहरू देखाउँनेछ जुन मेल खान्छ।
सेता पृष्ठहरु संग डाटाबेस अझै धेरै व्यापक छ। त्यसैले स्पेनको मामलामा, विशेष गरी यदि हामी इन्टरनेटको उपस्थिति नभएको कसैलाई खोज्दैछौं भने यो एकदम सहज तरीका हो। यस व्यक्तिसँग कसरी सम्पर्क राख्ने भन्ने बारे जानकारी प्रायः प्रदान गरिन्छ, जस्तै फोन नम्बर। त्यसकारण, हामी कुनै पनि समय धेरै समस्या बिना प्रयोग गर्न सक्दछौं।
यो वेबसाइट एक हो प्राय: विशाल व्यक्तिहरू जुन हामी भेट्टाउँछौं। योसँग विशाल डाटाबेस छ, जुन वेबको अनुसार about,००० लाख मानिस छन्। त्यसकारण, यो राम्रो विकल्प हो जब यो इन्टरनेटमा कसैलाई खोज्नको लागि आउँदछ, किनकि त्यहाँ एक उच्च सम्भावना छ कि हामी यस व्यक्तिलाई भेट्टाउनेछौं। वेबको अपरेशन परम्परागत खोज इञ्जिनसँग मिल्दोजुल्दो छ, हामीले यस व्यक्तिको केही डाटा प्रयोग गर्नुपर्नेछ (नाम, थर, शहर, आदि)। त्यसैले हामीसँग यो फेला पार्न धेरै विकल्पहरू छन्।
राम्रो कुरा त्यो हो तपाईको खोजीहरूमा धेरै फिल्टरहरू प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि हामी यसलाई प्रयोग गर्दा हामी अझ राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं। यस तरिकामा, हामी बढी सफल हुन सक्दछौं जब हामीले कसैलाई खोज्नुपर्दछ, विशेष गरी यदि तिनीहरूको धेरै सामान्य नाम छ। यो एक सबै पूर्ण, प्रयोग गर्न सजिलो र प्रभावकारी विकल्पहरू मध्ये एक हो, त्यसैले तपाईं इन्टरनेटमा खोजिरहनु भएको व्यक्तिलाई भेट्टाउन सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं Pipl पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यो लिंकमा
यो उपकरण फरक छ, किनकि यसले ती केसहरूमा केन्द्रित गर्दछ जसमा तपाईंसँग एक व्यक्तिबाट ईमेल छ वा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ व्यक्ति जो एक विशिष्ट कम्पनी मा काम गर्दछ। यदि तपाईंसँग यो जानकारी छ भने, त्यसोभए तपाईं हन्टरमा जान सक्नुहुन्छ, जुन त्यस सम्बन्धमा सबभन्दा पूर्ण विकल्प मध्ये एक हो। विशेष गरी ठूला कम्पनीहरूको मामला मा, यो चासो को लागी एक व्यक्ति को डेटा खोज्न को लागी हुन सक्छ, र यसैले कसरी थाहा छ कि उनी संग सम्पर्क छ। तिनीहरूसँग धेरै ठूलो डाटाबेस उपलब्ध छ।
त्यसकारण, यो राम्रो वेबसाइट हो जब कसैलाई खोज्ने कुरा आउँदछ, तर फरक तरिकाले। यस अवस्थामा हामी फरक जानकारीबाट शुरू गर्दछौं, जस्तै यस अर्थमा ईमेल ठेगाना राख्नुपर्दा। हामी सबै प्रकारका कम्पनीहरूमा व्यक्तिहरूको लागि संसारभरिबाट खोजी गर्न सक्दछौं, जुन यस वेबसाइटको प्रयोगले हामीलाई दिन्छ भन्ने कुरामा कुनै शou्का छैन। यदि तपाईं प्रविष्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यो लिंकमा यो गर्न सक्नुहुन्छ.
सेतो पृष्ठहरु जस्तै, अर्को क्लासिक हामी घरमा प्रयोग गर्थ्यौं, तर त्यो अब हामी इन्टरनेटमा प्रयोग गर्न सक्छौं, QDQ हो। यो एक गाईड हो जुन हामी कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी फेला पार्न सक्दछौं, यद्यपि यो व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहन्छौं भने पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी एक विशेष व्यक्ति को लागी खोजी गर्न सक्दछौं, उदाहरणका लागि उनीहरुको टेलिफोन नम्बर वा ठेगाना प्राप्त गर्न। एक क्लासिक विकल्प, जुन वर्तमानमा रहन्छ।
यस अवस्थामा व्यक्तिको खोजी भिन्न तरीकाले प्रयोग गर्नुपर्‍यो, यो लिंक. हामीलाई व्यक्तिको बारेमा निश्चित जानकारी प्रविष्ट गर्न भनियो हामी के खोज्दैछौं। यो तार्किक छ, यस सन्दर्भमा सम्भव सबैभन्दा सटीक परिणामहरू प्राप्त गर्न हामीले हामीले उपलब्ध भएका परिचयहरू अवश्य गर्नुपर्दछ। त्यसो भए ती नतिजाहरू ती व्यक्तिबाट आउँनेछन् जुन तपाईंको खोजी सर्तहरूसँग मिल्नेछ। इन्टरनेटमा व्यक्ति फेला पार्न र तिनीहरूको सम्पर्क विवरणहरूको पहुँच गर्न अर्को राम्रो तरिका।
अन्तिम स्थानमा, हामी अर्को सामाजिक नेटवर्कमा जान सक्दछौं, यस श्रम को मामला मा। हुनसक्छ एक व्यक्ति हामीले इन्टरनेटमा हेर्छौं त्यो व्यक्ति हो जुन हामीले काम मार्फत भेट्यौं, वा जसलाई हामी कामको कारणका लागि सम्पर्क गर्न चाहन्छौं। त्यसकारण हामी तपाईलाई यो खोज्न को लागी प्रयास गर्न सक्दछौं कि यदि तपाईसँग राम्रो काम गरीने सामाजिक नेटवर्कमा प्रोफाइल छ। साथै, यस केसमा खोजीहरू सहि हुन सक्छन्।
लि Lin्कइनमा खोजी गर्दा देखि, हामी फिल्टर को उपयोग गर्न सक्छौं, जस्तै शहर थप्ने, गतिविधि क्षेत्र (आदर्श यदि हामीलाई कम्पनी वा यस व्यक्तिको काम गर्ने क्षेत्र थाहा छ भने), साथै अन्य डेटा। हामीलाई चाहिने सबै कुरा ताकि हामी सम्भव व्यक्तिलाई सकेसम्म साधारण तरीकाले भेट्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » कसैलाई अनलाइन कसरी भेट्ने?